Emeputala ụdị ọhụrụ nke IDE Qt Onye Okike 4.10.0 | Site na Linux
Emeputara ohuru nke IDE Qt Creator 4.10.0
Izu gara aga ekwuputara ọkwa nke mmalite nke ụdị IDE Qt Onye Okike 4.10.0, mbipute nke etinyere ụfọdụ atụmatụ ọhụrụ na mwekota na LSP.
Dentro nke njirimara ndị bụ isi nwere ike ime ka ọ pụta ìhè site na Qt Onye Okike anyị nwere ike ịchọta:
Onye ndebanye koodu nwere nkwado maka C ++, QML na ECMAscript
Ngwaọrụ maka igodo koodu ngwa ngwa
Nkọwapụta nke nkọwapụta na koodu ntinye onwe
Static akara nke koodu na ịke ka ị pịnyere
Nkwado maka mgbanwe koodu
Ihe gbara ya gburugburu
Abụọ parenteses na nhọrọ ụdịdị
1 Ihe ohuru na IDE Qt Onye Okike 4.10.0
2 Etu esi wunye Qt Creator 4.10.0 na Linux?
Ihe ohuru na IDE Qt Onye Okike 4.10.0
Na ọhụrụ version, ike itinye faịlụ na agbakwunye na nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ, mgbe nke a gasịrị, a na-egosipụta faịlụ ndị a n'elu ndepụta akwụkwọ mepere emepe ma meghee mgbe mechiri otu faịlụ, dị ka "Njikwa> Mechie ihe niile na Faịlị> Mechie faịlụ niile".
Ọzọkwa guzo apụ a ntinye ndi ozo zuru oke maka LSP (Asụsụ Server Protocol) na igbe ọchụchọ nke ihe nzacha ọhụrụ pụtara na-egosipụtakwa ihe kpaliri nke sava ahụ.
E wepụrụ ọkọlọtọ pilot na Locator, ngwa mgbakwunye nke enyere ya aka na ndabara. Agbakwunyere ike iji nyochaa ntinye na dashboards na omume kwekọrọ site na ngosipụta.
Maka oru ngo kere na CMake ma ọ bụ Qbs, nkwado maka lekwasịrị anya n'elu ikpo okwu nke A gam akporo.
Maka CMake, a kwụsịrị usoro ikpo okwu 'Ndabere', nke mere ka ọgba aghara maka ndị mmepe.
Iche iche faịlụ na CMake oru nwere ike ugbu a ga-wuru site na Mee> Mepụta File menu ma ọ bụ site na onodu menu na oru ngo osisi.
Ngwa Qt Widgets yana Ọkachamara Ọbá akwụkwọ C ++ gbakwunyere ikike ịhọrọ usoro ihe owuwu.
A gbakwunyere nkwado maka ule agbam ume. Maka ebumnuche ụlọ ọrụ Linux dị na mpụga, agbakwunyela nkwado maka itinye faịlụ niile arụnyere n'oge nrụnye maka usoro ihe owuwu.
Etu esi wunye Qt Creator 4.10.0 na Linux?
Ndị niile chọrọ ịnwale QT kere ihe na sistemụ ha kwesịrị ịma nke ahụ ọtụtụ Linux distros nwere ike ịchọta ngwugwu n'ime nchekwa ha.
Ọ bụ ezie na mmelite ngwugwu n'ozuzu na-ewe ụbọchị ole na ole iji ruo ebe nchekwa, yabụ ọ ka mma ibudata nrụnye ahụ na weebụsaịtị QT ebe ị nwere ike ịnweta nsụgharị ahụ n'efu ma ọ bụ maka ndị chọrọ ịzụta ụdị azụmahịa (yana atụmatụ ndị ọzọ) mee ya na peeji a.
Ozugbo emerela nbudata instal, Anyị ga-enye ya ikikere igbu ya na iwu ndị a:
Ugbu a, anyị ga-etinye ngwugwu ahụ na-agba iwu na-esonụ:
N'ihe banyere ndị ọrụ Ubuntu,, ị nwere ike ịchọrọ ụfọdụ nchịkọta ndị ọzọ nke ị nwere ike iwunye na:
Ozugbo awụnyere ngwugwu ndị a, ịnwere ike gbanwee nkọwa nke ngwa desktọọpụ gị wee họrọ ụdị nke ziri ezi. N'ikpeazụ, ị nwere ike ịmechaa ọrụ ahụ ma gaa n'ihu na nzuzo.
Ugbu a maka ndị bụ ndị ọrụ Arch Linux, Manjaro, Arco Linux na ndị ọzọ distrikti Arch Linux ha nwere ike iwunye ngwugwu ahụ ozugbo site na ebe nchekwa dị ka ụdị ọhụụ nke onye okike QT dị ugbu a.
Iji wụnye, na-agba ọsọ na-esonụ iwu na ọnụ:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Emeputara ohuru nke IDE Qt Creator 4.10.0
Richard Stallman kwuru gbara arụkwaghịm na MIT na onye isi FSF